KaungKhantNaing03 အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒဏ္ဍာရီ: in - အင် dra - ဒြ ဣ - အိ လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ဣန္ဒာ - အိန်ဒါ ဖြစ်သွားပါမယ်။ မှားယွင်းနေပါတယ်။
ဣန္ဒာ: in - အင် dra - ဒြ ဣ - အိ လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ဣန္ဒာ - အိန်ဒါ ဖြစ်သွားပါမယ်။ မှားယွင်းနေပါတယ်။
ဒေဝါလီ: Deepavali - ဒီပါ၀လီ Di - ဒီ Diwali - ဒီဝါလီ ဖြစ်ပါတယ် ဒေဝါလီခံတယ်ဆိုတာ သက်သက်ပါ။ မတူတာကို မရောချပါနဲ့။ ဟိန္ဒူသာသနာကို အသရေဖျက်သလို ဖြစ်နေပါပြီ။
သူရဿတီ: why are you spreading wrong Information on Wikipedia ?? Saraswati and Thurathati are totally different. If such sacrilege continue, the Hindu Society is gonna meet up and get in touch with media for this case.
သျှရီကာလီမယ်တော်ကျောင်းတော်: ဟိန္ဒူဘုရားတွေကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ။
ကရစ်ရှနား: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်
ဗြဟ္မာ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်, ဟိန္ဒူဘုရားတွေကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ။ နာမည်အမှားတွေ ပြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိဿနိုးနတ်: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်, ဟိန္ဒူဘုရားတွေကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ။ နာမည်အမှားတွေ ပြင်ခဲ့ပါတယ်။
သိဝ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်, ဟိန္ဒူဘုရားတွေကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ။ နာမည်အမှားတွေ ပြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကာလီမယ်တော်: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်
ကာလီမယ်တော်: Making to become perfect
ကိုးကွယ်သည့် ဘုရား နှင့် နတ်ဒေဝါမျာ: ကာလီ မယ်တော်သည် စကြ၀ဠာ၏ မိခင် ဖြစ်တယ်။ သူ့ဆီ ဆိတ်သတ်ခြင်း မပြုရပါ။ ဘုရားကျောင်းမှာ ဘုရားရုပ်ထုဘဲ ရှိပါတယ်။ နတ်ရုပ်ထု မရှ်ိပါ။ ဟိန္ဒူဘာသာမှ ဘုရားများကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ
အခြေခံ ယုံကြည်ချက်များ: Paramatma ပရမတ္တမ သစ္စာတရားကို ပြောတာပါ နတ်မင်း မဟုတ် ဘုရားတွေပါ။ ဘဂ၀ဒ်ဂီသာ ကျမ်းဖတ်ပါ။ အတ္တ အဟုတ် အာသ်မာပါ
ဘုရားဝင်စား အဝတာရများ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည်
ဓာတ်ပုံများ: ဟိန္ဒူဘုရားတွေကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ။
ဝေဒခေတ်: မီးဟုမ်း Yajna ယဇ်ဆို ပိုမှန်မယ်။
Hindu ဘာသာကို စော်ကားတိုက်ခိုက်လိုတာလား: အပိုင်းသစ်
ဗိသုကာလက်ရာများ: Only Brahma emerge from Vishnu's Navel. Why u guys are insulting Hindu by using the word (NAT)? Any intentions?
သူရဿတီ: မင်းတို့က ဟိန္ဒူကို အသေနှိမ့်ချ စော်ကားပါလားဟ 😆
ဝေဒခေတ်: မင်းတို့ ဒီဟာမထည့်ရင် ဘုရားတွေ နဲ့ နတ်မင်းတွေ ရောကုန်မယ်။
Dashavatara: Bhumi Devi မယ်တော်ပါ။ နတ်ဘုရားဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီမှာဘဲရှိတယ်။ ဟိန္ဒူကျမ်းမှာ မရှိ။
ကိုးကွယ်သည့် ဘုရား နှင့် နတ်ဒေဝါမျာ: မင်းတို့ ဟိန္ဒူကို စော်ကားတာများပြီနော်။ဘုရားတွေကို နတ်လုပ်။ ‌ဒေဝါလီက မင်းတို့ခံရမှာ။ ဒီပါဝါလီ ဟ။
အိန္ဒိယဘာသာရေးများ: ဝီကီပီဒီယာက ဟိန္ဒူကို စော်ကားပြီး နတ်ဘုရားလုပ်နေတာလား ?
ဗြဟ္မာ: ဗြဟ္မာဟု လုံး၀ မသုံးသင့်။ ဟိန္ဒူကို ဗုဒ္ဓဘာသာအောက် ဆွဲသွင်းတာလား။
ဝေဒခေတ်: လိုအပ်သည်ကို ဖြည့်စွက်သည်။
ဗိသုကာလက်ရာများ: Adi Shesha Naga ပါ။ ကာလ နဂါးမင်း မဟုတ်။ Narasimha ပါ နရသီဟ မဟုတ်။ ဟိန္ဒူ ဘုရားတွေကို နတ်မင်းလုပ်တာ နှိပ်ကွပ်သလိုပါဘဲ။
နတ်လှောင်ကျောင်း: မြန်မာ ဝီကီပီဒီယာက ဟိန္ဒူ‌ဘုရားတွေကို နတ်လုပ်ပြီး နှိပ်ကွပ်နေသလိုဘဲ။
အိန္ဒိယဘာသာရေးများ: ဟိန္ဒူဘုရားများပါ။နတ်ဘုရားမဟုတ်ပါ။နတ်ဘုရား ကဏ္ဍအောက် ဘုရားတွေကို မထည့်သင့်ပါ။God သည် ထာ၀ရဘုရားရှင် Lord သည် လူသားဇာတိခံဘုရားရှင် Demigod သည် နတ်မင်း နတ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကွဲပြားပါစေ။ မြန်မာဝီကီပီဒီယာက နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီဒီယာကို တလွဲလုပ်နေတယ်။
နတ်ဘုရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုကိုးကွယ်ခြင်း: ဟိန္ဒူဘာသာတွင် နတ်ဘုရား Demigod ကိုးကွယ်မှု မရှ်ိပါ။
ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်း: ဟိန္ဒူဘုရားတွေကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ။
ဘဂဝါဂီတ: စာလုံးပေါင်းကို မြန်မာပြည်မှာ ထုတ်ထားတဲ့ Bhagavad Gita ယထာရူပကို ကြည့်ပါ
ဒိုင်ကိုကုတန်(ဂျပန်ဘာသာ: 大黒天 Daikokuten): ဟိန္ဒူဘုရားတွေကို နတ်မလုပ်သင့်ပါ။
ဗြဟ္မာ: အခု ကိစ္စကို မပြုပြင်ဘဲ ဗြဟ္မာ သူရဿတိ လုပ်ရင် ဟိန္ဒူဘာသာကို စော်ကား နှိမ့်ချတယ်လို့ မှတ်ယူပါမယ်။
ဗြဟ္မာ: ဗြဟ္မာသည် ၃၁ ဘုံ ၌ ကြင်လည်နေသူဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူ Trimurti ဘုရား သုံးဆူဟာ သံသရာစက်၀န်းမှ ကင်းလွတ်ပြီး ဘုရားများဖြစ်တယ်။ နတ်ဘုရား မဟုတ်ပါ။ ဒီဟာကို ဟိန္ဒူသာသနာရေး အဖွဲ့ချုပ်က စာ ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သလို မြန်မာပြည် သင်ရိုးမှာပါ ဘုရားဟု ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားရသည်။
မဟာဘာရတ္တကျမ်းပါ ဂဠုန်ငှက်: Indra သည် နတ်ဘုရား ဗစ်ရှ်နူးသည် ဘုရားဖြစ်သည်။ Amrit အမတ္တ ရေစင် အကြောင်း သေချာ လေ့လာပါ။ ‌ပျားရည် မဟုတ်ဘဲ ပျားရည်ရေးပြီး ဟိန္ဒူသမိုင်းကို ပျက်ရယ် မပြုသင့်။
ဂဠုန်: God ဘုရား နဲ့ Demigod နတ်ဘုရား ကွဲပါစေ။ ဗစ်ရှ်နူးသည် ဘဂဝါ ဘုရားဖြစ်သည်။
Dashavatara: မတ်စ်ယသည် ဟိန္ဒူကျမ်းဂန်၌ အတိအလင်း ဖော်ပြထားသော ကျမ်း သမိုင်း ဒဏ္ဍာရီဖြစ်သည်။ သမိုင်းကို ချဲ့ထားခြင်း မရှ်ိဘဲ။ ကျမ်းဂန်တို့၌ ကွဲပြားခြင်းမရှိ တူညီစွာ ရှိနေကြောင်း သိနိုင်တယ်။
ကိုးကွယ်မှု: နတ်သမီး နှင့် မယ်တော် မတူပါ။ ဆရဆွတိ ကို နတ်သမီးဆို ဟိန္ဒူဘာသာ၀င်တို့ကို ဒဲ့ စော်ကားတာဘဲ။
Dashavatara: Kalki ကာလ်ကီ ပါ။ ကမ္ဘာမြေပြင် မိခင် မယ်တော်ပါ။ နတ်ဘုရားမ မဟုတ်။ ၀က်သိုး ဆိုတာထက် တော၀က် ဆိုတာ ပိုမှန်မယ်။ ဗစ်ရှ်နူးကို ပရာဗရဟ်မာ ပရမတ္တမာ လို့ဘဲ ခေါ်တယ်။ ဗြဟ္မာ မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ကျမ်း ဖော်ပြချက်မှာမှ မပါပါ။
Dashavatara: ဗိဿနိုး နတ်ဘုရားမဟုတ် ဘုရားပါ။ Vishnu Puran , Srimad Bhagavatam ဖော်ပြချက်အရ Dashavater ဟာ အတိအကျ ရှိပြီးသား မူကွဲမရှိပါ။
သူရဿတီ: သူရဿတိမယ်တော် ပိဋကတ် သုံးပုံကို စောင့်ရှောက်တာ သံဃာတော်တွေ ကိုယ်တိုင်ပါ။ ဟိန္ဒူမှာ Brahma ဘုရားရဲ့ ကြင်ယာတော်က Saraswati မယ်တော်ဘဲ။ ဝေဒကျမ်းကိုထိန်းသိမ်းတယ်။ နှစ်ဦးမတူပါ။ ဟိန္ဒူဘုရားကို နတ်စာရင်းသွင်းတာ စော်ကားသလိုဘဲ။ အဲ့တော့ ဟိန္ဒူမှာ နတ်မရှိတာ သတိပြုပါ။
၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
သိဝ: ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် မကိုက်ညီသော စော်ကားထားသည်များ ပါ၀င်နေသည်။
Dashavatara: ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် မကိုက်ညီသော စော်ကားထားသည်များ ပါ၀င်နေသည်။
ကျမ်းစာသားများ: ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် မကိုက်ညီသော စော်ကားထားသည်များ ပါ၀င်နေသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှု ဇာတ်လမ်း: ဟိန္ဒူဘုရားသည် နတ်ဘုရား မဟုတ်ပါ။
သိပ္ပံနည်းကျ ဗုဒ္ဓဘာသာ: သဒ္ဒါပြင်ခဲ့သည်
ပိုဟောင်းသော ၅၀ ခု
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/KaungKhantNaing03" မှ ရယူရန်